Raha niezaka nampianatra ny Alemà momba ny Nazisma ny Breziliana sasany, ny hafa kosa niala tsiny tamim-pahamenarana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Septambra 2018 5:27 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Português, Italiano, русский, Français, English
Ao amin'ny lahatsary mitondra ny lohateny hoe “ahoana ny fomba ampianaran'izy ireo ny tantara any Alemaina”, hoy ny Masoivoho ao amin'ny firenena: Tsy manafina ny lasan'izy ireo ny vahoaka Alemà Sary: Reproduction/Facebook
Nandritra ny taona vitsy lasa, nanjary malaza tany Brezila ny manamafy fa elatra ankavia i Adolf Hitler sy ny antokony Nazi; Mifototra amin'ny zava-misy tsotra sy mazava ara-bakiteny ny hevitra fa ny dikan'ny anarana fenon'ny antokony dia hoe “Antoko Sosialista Nasionalin'ny Mpiasa. Ary ny “sosialista” dia mitovy amin'ny hoe ankavia, marina ve izany?
Tsy marina izany, mazava ho azy. Saingy, nipoitra indray ny teoria mahatsikaiky teo amin'ny Breziliana rehefa avy nandefa lahatsary manazava ny fanomezan-danja ataon'i Alemaina “mahafantatra sy mikajy ny Tantarany, ka tsy voatery hamerina izany izy” ny Masoivohon'i Alemaina ao Recife, Pernambuco, any amin'ny faritra avaratra-atsinanan'i Brezila
Tao anatin'ny minitra vitsy monja, manontany izay mety hitranga ilay lahatsary, izay efa nisy nijery in-829.000 tamin'ny fotoana nanoratana hoe “rahoviana no hiverina eto an-tanindrazana ny elatra havanana hiringiriny”? Novaliany tamin'ny fomba fiteny avy amin'ny minisitry ny Raharaham-bahiny Heiko Mass hoe:
“Mila manohitra ireo hiringiriny avy amin'ny ankavanana isika, tsy tokony hanadino azy ireo isika, tsy maintsy manandrina ny tavantsika amin'ny neonazis sy ny anti-Semita isika (…) Normaly ny hoe izay rehetra manohitra ny Nazis dia tsy avy amin'ny ankavia”.
Taorian'ny famoahana ilay lahatsary, feno fanehoan-kevitra avy amin'ireo vondrona ankavanana ny pejy ofisialin'ny Masoivoho, manontany ny fomba fijerin'ny Alemà manokana ny Nazisma:
Lazain'ny masoivoho Alemà izay tian'izy ireo hinoanao. Ny ampahany ratsy indrindra dia ireo fanehoan-kevitra avy amin'ireo mpahay tantara izay tsy namaky akory ny boky tantara an-tsary. Tsy avy amin'ny ankavanana velively ny Nazisma. Tsy maintsy mijery ny tantara voasoratra fotsiny ianao. Vendrana ireo izay mino izay rehetra lazain'ny olona.
Mpaneho hevitra iray hafa tao amin'ny pejy Facebook-n'ny Masoivoho Alemana kosa nanadihady ny filazan'ilay horonan-tsary fa namorona lalàna ny firenena tamin'ny taona 1976 izay mandràra ny olona hametraka fanontaniana momba “ny fahamarinan'ny Fandripahana, satria nampibaribary ity sangy ratsy ity ireo manam-pahaizana.” Namaly ny olona iray hafa, ary nilaza fa “efa voaisa ireo andron'ny “Holofraud”.”
Tamin'ny volana Mey, nisioka fanambarana fanohanana ny teoria ilay mpanolotra vaovao menavazana avy amin'ny TV Globo, Alexandre Garcia:
Tianao ve aho hilaza ny anaran'ny antoko Nazi an'i Hitler? Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Midika hoe. Antoko Sosialistan'ny Mpiasa Alemà. Ekeko fa mazava izany. Araka ny fomba fampiasan'izy ireo, tsy kisendrasendra izany.
Tamin'ity indray mitoraka ity, dia haingana ny fanehoan-kevitra. Raha nanala-baraka ny firenena ny Breziliana sasany (izay ratsy kokoa ny vazivazin'ilay mpisera Twitter iray noho ny fanomezana isa 7 sy 1 tamin'ny Amboara Manerantany 2014), ny hafa kosa miala tsiny tamin'ny tenin-dry zareo:
Diso ny masoivoho Alemana. Little Joe avy any amin'ny mpivarotra enta-madinika, izay mba nahazo ny vaovao avy amin'ny sary-sy-soratra WhatsApp no marina.
Namorona fehezan-teny vaovao indrindra amin'izao fotoana izao ny mpiserasera iray:
BRAZILIANSPLAINING: Miezaka manazava amin'ireo ALEMA mikasika ny natao hoe NAZISMA sy ny FANDRIPAHANA ireo Breziliana falifaly izay tsy mba niraharaha ny politika mihitsy (saingy nahita horonan-tsary roa tato anatin'ny volana vitsy, ary nanatevin-daharana ny vondrona Facebook ary ankehitriny, mino ny tenany ho manampahefana MAXIMUM amin'io raharaha io).
Taorian'ny adihevitra, tamin'ny tafatafa ho an'ny gazety O Globo, nanambara ny ambasadera Alemà ao Brezila, Dr. Georg Witschel, fa “hadalana ny filazana fa ankavia ny Nazisma”.
Manazava bebe kokoa
Tamin'ny resadresaka niarahana tamin'ny gazety El Pais, Damaris Jenner, mpitondratenin'ny gazety ho an'ny Masoivoho, nanazava ny fomba nahatongavan'izy ireo tamin'ny hevitra:
Ny herinandro izay niheveranay hanaovana io horonantsary io, dia nisy ny fihetsiketsehana tao Chemnitz ary fampahalalam-baovao Breziliana maromaro no nitatitra izany”, hoy izy. Notarihan'ireo mpikatroka elatra havanana mahery fihetsika hatramin'ny faran'ny volana Aogositra ny hetsi-panoherana ny fahafatesana lehilahy Alemà iray, izay voalaza fa notsatohan'ireo mpifindra monina roa tamin'ny antsy, izay niafara tamin'ny herisetra bebe kokoa. “Nieritreritra izahay fa mety hahaliana ny mampifandray ireo lohahevitra roa ireo mba hampisehoana an'ity adihevitra ity any Alemaina”, hoy i Jenner. Nahagaga azy ireo ny fanehoan-kevitra. “Tsy azonay an-tsaina fa hisy vokany tahaka izao izany.”
Nilaza ihany koa taratasy fa misy ny voambolana Alema mamaritra ity fizarana ity: Fremdschämen—raha menatra noho ny fihetsika nataon'ny olon-kafa ianao.
Niezaka namarana ny adihevitra ny gazetiboky SuperInteressante, manazava fa nifanakaiky kokoa tamin'ny ankavanana ny Nazisma fa tsy ny ankavia. Na dia eo aza ny fitondrana ny “sosialista” amin'ny anarany, naniratsira ny komonisma endrika Sovietika ny fitondrana ary niankina bebe kokoa tamin'ny fahalalahana ara-toekarena, izay rafitra ara-politika zatra mifandray amin'ny ankanana.
Zava-dehibe kokoa noho ny hoe ao anatin'ny ankavanana na ankavia, ny tena namaritra ny politika sy ny tanjon'i Adolf Hitler dia tsy kapitalisma, na sosialisma velively: fa (rasisma) fanavakavahana. Niavaka tamin'ny nasionalisma ho an'ny olona vitsivitsy, ny Alemà “arians” ny Nazisma, sy ny fomba nanamafisany orina azy tamin'ny taona 1930. Ny vondrona hafa rehetra izay tsy sahaza an'izany hevitra izany dia tsy navela ho isan'ny Fanjakana Alemana.
“Iray amin'ireo fizarana mahery setra indrindra teo amin'ny tantara” ny Fandripahana. Niafara tamin'ny fahafatesana an-tapitrisany ny “Vahaolana Farany” nataon'ny Nazi, drafitra hamongorana ireo jiosy avy amin'ny fireneny sy ireo tany resin'ny fitondrana. Ary, araka ny fanazavan'ny BBC:
Tsy ny Jiosy ihany no lasibatry ny Nazisma. Tombanana fa sivily 15 tapitrisa no novonoin'ity fitondrana mpamono olona sy mpanavakava-bolon-koditra ity, anisan'izany ireo Slavy sy ‘aziatika’ an-tapitrisany, Gypsies 200.000 ary mpikambana amin'ny vondrona maro hafa. Olona an'arivony, anisan'izany ny Alemà taranaka Afrikanina no noterena tsy hiteraka intsony.